How can i change??? — MYSTERY ZILLION
January 2011 edited January 2011 in Blog
ကျွန်တော့် Wordpress မှာ SimpleFolio ဆိုတဲ့ Theme ကို Offline စမ်းသုံးကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Title တွေမှာ မြန်မာ Fonts မမြင်ရပါဘူး။ Body မှာတော့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါဘယ်လို ပြင်ရမလဲမသိလို့ပါ။ အဲ့ Theme ကို အရင်က ကိုစေတန်သုံးသေးတယ်ထင်တယ်။ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါအုံး
အဲ့ theme လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ theme နှစ်မျိုးလောက်ရှိသေးလို့ပါ။ ဒီ ဟာကိုပြင်လို့ရရင် နောက်ဟာတွေကိုပါ စမ်းပြင်ကြည့်ချင်လို့ပါ။
Theme name: SimpleFolio 1.5 by Omar Corrales
(sry .. i can't attach file)
ပြင်ထားတဲ့ CSS ကိုပြပါ ဒါမှမဟုတ် သုံးထားတဲ့ဆိုက်ရဲ့လင့်ကိုပေးပါ အဲဒါမှဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောလို့ရမယ် အခုကမမြင်ရတော့မသိဘူး။
I think u need to edit CSS .
Try yourself . That will improve your coding skill
My site is http://k-dream.freehostingcloud.com (or) http://www.k-dream.tk
yes , I already describe before ...
it's using cufon ... it just embed English character ... not include Myanmar Character in Cufon embed font.
So, just the header font in css
Ok ... I'll try. Arigatoo :rolleyes: